Shirwaynaha Barcelona ayaa qeexaya mustaqbalka waara ee dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Shirwaynaha Barcelona ayaa qeexaya mustaqbalka waara ee dalxiiska
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Shirwaynaha Barcelona ayaa qeexaya mustaqbalka waara ee dalxiiska.
Shirku waxa uu ku dhamaan doonaa 'Wicista Waxqabad ee Barcelona', bayaan ujeedo ah oo ay saxeexeen dawladaha, meelaha la tagayo iyo ganacsiyada oo qeexaya aragtida la wadaago ee cagaarka, loo wada dhan yahay iyo dalxiiska adkaysiga leh, iyada oo la tixraacayo qayb ka mid ah waxtarka suurtagalka ah ee waaxdu ee Yoolalka Horumarinta Joogtada ah iyo u beddelo net-eber.
Shirku wuxuu ku xisaabtamayaa ka qaybgalka hoggaamiyeyaasha ganacsiga, siyaasadda iyo fagaarayaasha caalamiga ah.
Shir-madaxeedka ayaa si cad u qeexaya muhiimadda ay leedahay iskaashiga si loo dhiso dalxiis adkeysi leh oo waara.
Shirku wuxuu matalaa markii ugu horeysay ee qaybta la isu keeno tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.
UNWTO waxay ku biirtay Aasaaska Hoggaanka Sare iyo Hay'adda Incyde ee Rugaha Ganacsiga ee Isbaanishka maalinta furitaanka Mustaqbalka Shirka Caalamiga ah ee Dalxiiska (26-27 Oktoobar 2021). Shirku wuxuu matalaa markii ugu horeysay ee qaybta la isu keeno tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.
Isagoo iftiiminaya muhiimadda aan hore loo arag ee dalxiiska, Shirku wuxuu ku xisaabtamayaa ka qaybgalka hoggaamiyeyaasha ganacsiga, siyaasadda iyo fagaarayaasha caalamiga ah, iyadoo Boqorka Spain Boqor Felipe VI uu u yahay Madaxweyne Sharafeed. Ku biirista Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili waxay ahaayeen Rebecca Grynspan, Xoghayaha Guud ee Shirka Qaramada Midoobay ee Ganacsiga iyo Horumarinta (UNCTAD), Mauricio Claver-Carone, Madaxweynaha Bangiga Horumarinta Inter-American (IADB), Juan Carlos Salazar, Xoghaye- Guud ahaan Hay'adda Duulista Rayidka ee Caalamiga ah (ICAO), Reyes Maroto, Wasiirka Warshadaha, Ganacsiga iyo Dalxiiska ee Spain, Juan Verde, Madaxweynaha Hay'adda Hoggaanka Sare, iyo José Luis Bonet, Madaxa Rugaha Ganacsiga ee Spain. Waxa dhinac socday 10 Wasiir oo Dalxiiska ah oo si shaqsi ah uga qayb galay, iyadoo ay jiraan Wasiiro badan oo si toos ah ugu biiray.
Iskaashiga, maalgelinta iyo hal-abuurka
Shir-madaxeedkani wuxuu si cad u qeexayaa muhiimadda ay leedahay iskaashiga, iyo sidoo kale doorka muhiimka ah ee maalgelinta dalxiiska iyo ka faa'iidaysiga awoodda hal-abuurka ay ka ciyaari doonto dhisidda dalxiis aad u adkeysi badan oo waara.
Xoghayaha Guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa yiri: "Kulankan wuxuu si cad u qeexayaa muhiimada iskaashiga, iyo sidoo kale doorka muhiimka ah ee maalgelinta dalxiiska iyo ka faa'iidaysiga awoodda hal-abuurka waxay ka ciyaari doontaa dhisidda dalxiis adkeysi leh oo waara."
Ku biirista Xoghayaha Guud Pololikashvili Dood heer sare ah oo ku saabsan 'Funding the Future of Tourism', Xoghayaha Guud ee UNCTAD Rebecca Grynspan ayaa carabka ku adkeeyay in "dalxiiska uu u baahan yahay taageero siyaasadeed iyo maalgashi." Ms Grynspan ayaa amaantay UNWTO Shaqadeeda kor u qaadista aqoonsiga iyo shahaadooyinka tan iyo bilawgii dhibaatada waxayna ku dartay: "Dalxiiska wuxuu noqon karaa tamar aad u wanaagsan iyo xoog si dib loogu dhiso si ka sii wanaagsan, si ka duwan iyo wadajir."
In barnaamij ka tarjumayay mudnaanta muhiimka ah ee UNWTO iyo guud ahaan dalxiiska caalamiga ah, maalinta koowaad waxa diiradda lagu saaray maalgelinta mustaqbalka dalxiiska, gaar ahaan dardargelinta isbeddelka kobaca eber-ka. Iyadoo hoggaamiyeyaasha dunidu ay u imanayaan Glasgow shirka Qaramada Midoobay ee Isbeddelka Cimilada (COP26) toddobaadka soo socda, doodaha ka dhacay Barcelona waxay sameeyeen go'aan cad oo dalxiiska si ay u qaataan hal-abuurka iyo sugidda maalgelinta lagama maarmaanka ah si ay ugu suurtagasho waaxdu inay ku noolaato waajibaadkeeda waxqabadka cimilada.
Barcelona 'kuwa yeertay tallaabo'